भजनसंग्रह 135 ERV-NE - परमप्रभुको - Bible Gateway
भजनसंग्रह 134भजनसंग्रह 136
भजनसंग्रह 135 Nepali Bible: Easy-to-Read Version (ERV-NE)
1 परमप्रभुको प्रशंसा गर!
परमप्रभुको नाउँको प्रशंसा गर!
परमप्रभुको दासहरू हो, उहाँको प्रशंसा गर!
2 ती मानिसहरू, जो परमप्रभुको मन्दिरमा,
र परमप्रभुकै मन्दिरका चोकहरूमा उभिहेका छन्, उहाँको प्रशंसा गर।
3 परमप्रभुको प्रशंसा गर, किनभने उहाँ भलो हुनुहुन्छ।
उहाँको नाउँको प्रशंसा गर, किनभने यो आनन्दमय छ।
4 परमप्रभुले याकूबलाई रोज्नु भयो,
इस्राएल परमप्रभु कै हो।
5 म जान्दछु परमप्रभु महान् हुनुहुन्छ!
हाम्रो स्वामी सबै देवताहरूभन्दा महान् हुनुहुन्छ!
6 परमप्रभुले चाहेका जे पनि,
आकाशमा, पृथ्वीमा, पातालमा, समुद्रमा र गहिरा सागरहरूमा गर्नुहुन्छ।
7 परमप्रभुले पृथ्वीभरि नै बादलहरू उठ्ने बनाउनु हुन्छ।
परमेश्वरले बिजुली र बर्षा पठाउनु हुन्छ।
परमेश्वरले हावा ल्याउनुहुन्छ।
8 परमप्रभुले प्रथम जन्मिएका सारा पुरूषहरू,
अनि मिश्रमा प्रथम जन्मिएका सारा पशुहरू नाश गर्नुभयो।
9 परमप्रभुले धेरै आश्चर्यजनक र अलौकिक कार्यहरू मिश्रमा गर्नुभयो।
परमप्रभुले फिरऊन र उनका अधिकारी प्रति त्यस्ता घटनाहरू गराउनु भयो।
10 परमेश्वरले धेरै ठूला-ठूला जातिहरूलाई परास्त पार्नुभयो।
शक्तिशाली राजाहरूलाई पनि उहाँले मार्नुभयो।
11 परमप्रभुले अमोरीहरूका राजा सीहोनलाई परास्त पार्नु भयो।
परमप्रभुले ओग् भन्ने बाशानका राजालाई परास्त पार्नु भयो।
परमप्रभुले कनानका सबै जातिहरूलाई परास्त पार्नुभयो।
12 परमेश्वरले तिनीहरूका भूमि इस्राएल लाई सुम्पनु भयो।
परमप्रभुले ती जग्गाहरू आफ्ना मानिसहरूलाई दिनुभयो।
13 हे परमप्रभु, तपाईंको नाउँ सदा-सर्वदा प्रख्यात रहने छ!
हे परमप्रभु, मानिसहरूले तपाईंलाई सदा-सर्वदा याद गर्नेछन्।
14 परमप्रभुले अन्य जातिहरूलाई दण्ड दिनु भयो,
तर परमप्रभुले आफ्ना दासहरूलाई कृपादृष्टि राख्नु भएको थियो।
15 अन्य मानिसहरूका देवताहरू सुन र चाँदीका मूर्तिहरू थिए।
तिनीहरूका देवताहरू मानिसहरूले बनाएका मूर्तिहरू मात्र थिए।
16 ती मूर्तिहरूका मुखहरू थिए तर बोल्न सक्दैनथे।
ती मूर्तिहरूका आँखाहरू थिए तर देख्न सक्दैनथे।
17 ती मूर्तिहरूका कानहरू थिए तर सुन्न सक्दैनथे।
ती मूर्तिहरूका नाकहरू थिए तर सुँघ्न सक्दैनथे।
18 तिनीहरू जसले ती मूर्तिहरू बनाए उनीहरू पनि त्यस्तै खालको हुनेछन्।
किनभने तिनीहरूले ती मूर्तिहरूमा सहायताको निम्ति भरोसा गरे।
19 हे इस्राएलको परिवार, परमप्रभुको प्रशंसा गर!
हे हारूनको परिवार, परमप्रभुको प्रशंसा गर!
20 हे लेवीको परिवार, परमप्रभुको प्रशंसा गर!
हे परमप्रभुको भक्तजनहरू हो, परमप्रभुको प्रशंसा गर!
21 सियोनबाट आएका परमप्रभु धन्य हुनुभयो,
हे यरूशलेम र उहाँको वास-स्थानबाट।
परमप्रभुको प्रशंसा गर।